Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Canada ilaa India ee Air Canada hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dadku waxay jecel yihiin inay dib ula midoobaan qoyskooda iyo asxaabtooda waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan si dhaqso ah dib ugu bilowno adeegga Hindiya oo aan tagno xarumaheena Toronto iyo Vancouver ka dib markii xayiraadihii laga qaaday Dowladda Kanada.
Duulimaadyadii Delhi, India ilaa Air Canada ee Toronto iyo Vancouver xarumaha Kanada ayaa dib u bilaabmaya.
Tan iyo markii adeegga la bilaabay 2015, Air Canada waxay ka duushay Toronto iyo Vancouver ilaa Delhi iyo Toronto ilaa Mumbai.
Air Canada ayaa qorshaynaysa inay duulimaadyo cusub oo aan joogsi lahayn ka bilowdo Montreal ilaa Delhi oo ay dib u bilawdo adeegga Mumbai sida ay xaaladda suuqa u saamaxdo.
Air Canada ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u bilaabayso duullimaadyadeeda aan joogsiga lahayn ee taga iyo ka imanaya Delhi, India, ka dib markii la qaaday xayiraadihii ay dawladda Kanada saartay duullimaadyadii aan joogsiga lahayn ee ka iman jiray Hindiya. Duulimaadyada diyaaradda ee Delhi ilaa Toronto iyo Vancouver ayaa dib u bilaabanaya maanta.
“Dadku waxay aad u jecel yihiin inay dib ula midoobaan qoyskooda iyo asxaabtooda waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan si dhaqso ah dib ugu bilowno adeegga Hindiya oo aan tagno xarumaheena Toronto iyo Vancouver ka dib markii xayiraaddii laga qaaday Dowladda Kanada. Waxaan sii wadeynaa inaan diiradda saarno suuqyada sii kordhaya ee saaxiibbada iyo qaraabada soo booqda, iyo si wadajir ah xiriirka dhaqan iyo ganacsi ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya Canada iyo India oo la filayo inuu koro sanadaha soo socda, Air Canada waxay si adag ugu taagan tahay suuqan muhiimka ah ee Aasiya-Baasifik, ”ayuu yiri Mark Galardo, Madaxweyne-ku-xigeenka Sare, Qorshaynta Shabakadda iyo Maareynta Dakhliga ee Air Canada.
Hawada Kanada waa hormuudka u dhexeeya labada dal. Tan iyo markii adeeggu bilaabmay 2015, Air Canada waxay duulimaadyo ka samaysay Toronto iyo Vancouver si Delhi iyo ka Toronto ilaa Mumbai. Shirkaddu waxay qorshaynaysaa inay duulimaadyo cusub oo aan kala joogsi lahayn ka bilowdo Montreal kuna aaddo Delhi oo ay dib u bilowdo adeegga Mumbai sida ay xaaladda suuqyadu oggolaanayso.
Hawada Kanada waa diyaaradda ugu weyn ee gudaha iyo dibedda ee Kanada, sannadka 2019, waxay ka mid ahayd 20 -ka diyaaradood ee ugu waaweyn adduunka. Waa markab sidda calanka Canada iyo xubin aasaase u ah Star Alliance, oo ah shabakadda gaadiidka cirka ee ugu dhammaystiran adduunka.